Ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe nkiri na-eme ihe nkiri | Rayson
Na Rayson, Mmelite teknụzụ na ihe ọhụrụ bụ uru anyị. Ebe ọ bụ na o guzobere, anyị na-elekwasị anya na ịhazi ngwaahịa ọhụrụ, imeziwanye ogo ngwaahịa, na ijere ndị ahịa ozi. Ergopedic na-agbatị mmiri mmiri taa, Rayson ga-adị elu dị ka onye na-eweta ọkachamara na ụlọ ọrụ. Anyị nwere ike imewe, mepụta, mepụta, ma ree usoro dị iche iche na nke anyị na-ejikọ mbọ niile na amamihe anyị niile. Ọzọkwa, anyị na-ahụ maka inye ndị ahịa ọrụ dịgasị iche iche maka ndị ahịa gụnyere nkwado ọrụ na ọrụ ọsọ ọsọ. May nwere ike ịchọpụtakwuo ihe banyere matrad procect na ụlọ ọrụ anyị na ụlọ ọrụ anyị site na ịkpọtụrụ nyocha US.various na-arụ ọrụ na Rayson n'ọtụtụ usoro nke mmepụta. Ha na-enyocha ngwaahịa ahụ site na akụkụ dị iche iche dị ka usoro, arụmọrụ, ike, ike, na arụmọrụ.